Ny andian-dahatsoratry ny detergent Liquid an'ny Innovate dia misy ny vilany Main, ny rafitra mampihetsi-po, ny rafitra fanafanana, ny rafitra banga, ny rafitra fanaraha-maso ary ny lampihazo, sns.
Ny agitator dia mety amin'ny fampifangaroana, fanalefahana ary ny homogenizing ny ranoka viscous samihafa. Ny rafitry ny fampifangaroana dia miaraka amina mpitaingin-tsoavaly tsy mitongilana na mpanelanelana amin'ny rindrina ary fanaraha-maso matetika. Ny vilany lehibe dia azo hafanaina sy hatsiaka araka ny takiana. Ny masinina dia mety amin'ny indostria toy ny detergent misy rano, agents auxiliary lamba, fahasalamana & fitsaboana, sakafo & zava-pisotro, hanitra ary injeniera simika tsara, sns.
Jit-JL-100L mpitaingina vovo-dronono
Kabinetra fanaraha-maso tsy misy vy, fifehezana bokotra
JB-200L Agitator mpamono rano
Jit-JL-650L Agérator mpanala rano
1300L mpitaingina vovon-tsiranoka
Rate (R / MIN)
Manaraka: Fuel mifangaro amin'ny rano phacoemulsification mandrehitra fitaovana fitsitsiana angovo